Laos ခရီးက သူရောင်(ယောင်)သီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » Laos ခရီးက သူရောင်(ယောင်)သီး
Laos ခရီးက သူရောင်(ယောင်)သီး
Posted by shwe ni on Jun 25, 2011 in Cultures, My Dear Diary, Photography, Travel | 33 comments
Laos စူဝနခတ် (Savannakhet)သွားတုံးက ရိုက်ခဲ့တာပါ . အပေါ်ပုံက Savannakhetဓျေးကရှေးဟောင်း ပစွှည်းရောင်းတဲ့ဓျေးတန်းလေးမှာ ငယ်ငယ်ကကြားဖူးတဲ့ ဥစွှာစောင့်ပုံပြင်တွေထဲက ပစွှည်းတွေပါတွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူရောင် (ယောင်)သီးစစ်မစစ်မသေချာပေမဲ့ ကိုတိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာမို့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ရွာမှာ ဖြန့်ဝေပေးတာပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်လောက်က နက္ခတာရာ မဂ္ဂဇင်းမှာ သူယောင်သီး ရထားတယ်။
ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်မှန်း မသိလို့ သိတဲ့ လူများ ဆက်သွယ်ပါဆိုပြီး ဆောင်းပါးနဲ့ ရေးပြီး ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတွေ ဘာတွေ နဲ့ ထည့်ထားတာ မြင်မိတယ်။
အဲဒီမှာ ပုံလည်း ပါတယ် မိန်းမပုံ ထိုင်ရက် အနေအထား ဖြစ်နေပြီးတော့.. အဖြူအမဲ ဆိုတော့ အရောင်တော့ သေချာ မသိဘူး။
သူယောင်သီးက ၄၅ရက်ပဲ ခံတယ်လို့ ရေးထားတယ်။ အသီးခူးပြီး ၄၅ရက် ကြာလို့ ဘာမှ အစွမ်းသိဒ္ဒိတွေ မလုပ်နိုင်ရင် အလိုလို ပုပ်သွားတယ် ပြောတယ်။ ပုပ်နံကလည်း ငါး ပုဇွန်တွေ ပုပ်သလို အနံ နံတယ်ဆိုပြီး ရေးပြီး ရှင်းပြထားတယ်။
မဟာမြိုင်ထဲ သွားတော့ သူယောင်သီး ရှိတဲ့ အပင်ဆိုပြီး လက်ညိုးထိုးပြတော့ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ မြင်ဘူးတဲ့ ပုံမျိုး မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ပုံစံ အမျိုးမျိုးလား မသိဘူး။
ပုံစံအမျိုးမျိုးဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် ဆူးရေ . ဒီအသီးတွေက လူလုပ်ထားတာအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ် ။ ကိုင်တော့ကြည့်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့မတော်တဆ ကျိုးပဲ့သွားရင် လျှေုာ်နေရမှာစိုးလို့ ခြစ်မကြည့်ရဲဘူး
ဓာတ်ပုံကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီ link လေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်…..
အဲဒေသက ထိုင်းသူငယ်ချင်းတွေကိုမေးကြည့်ဘူးတာတော့ အဲအပင်ကဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ် zawinaing ရေ
ခုလဲ ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါ . မမြင်ဘူးတာတွေဆို ကိုကမသိနိုင်တော့ လိမ်ကျတာပေါ့လေ။
အင်းလင့်ထဲကပုံတွေကိုတော့ အရင်တုန်းကတွေ့ဖူးတယ်။ အစစ်လား photoshop လားတော့မသိဘူး သေသပ်တယ်..။
ဖေဇော်ဂျီ့ တောင်ဝှေး မပါ ရင်တော့ သူယောင်သီး စစ်မစစ် ဘယ်သိနိုင်မလဲ လို့ ။ နော
အဲဒီ အပင်နဲ့ အသီးတွေ က လူတွေ ဖန်တီးထားတာလို့ ပြောပါတယ်။ အတုကြီး လို့ ပြောကြတယ်။
တစ်ခါမှ မကြားဖူးတာ မမြင်ဖူးတာကို မြင်တွေ့ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …
ရွှေမင်းသားတော့ ခက်ပြီ.. သူယောင်သီး ဆိုတာ တောထဲက ၀ိဇ္ဇာတွေ ကြိမ်လုံးနဲ့ တို့ပြီး သူယောင်မယ် တွေ ဖြစ်လာရင် ခိုင်းစားတာ.. တောထဲမှာ လမ်းလျှောက်တာ များလို့ ညောင်းရင် မာဆတ် လုပ်ခိုင်းတာ ပုံပြင်တွေ ၀တ္တုတွေမှာ ရေးထားတာပဲ။ ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ရင် ကိုယ်တိုင် ၀ိဇ္ဇာဖြစ်အောင် ကျင့်ပြီး စမ်းကြည့်ပေါ့.. အလုပ် ဖြစ်မဖြစ်..
ဇော်ဂျီတောင်ဝှေး ရရင် KTV မှာ မာဆပ် မှာဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ ရောင်းစားလို့ရပြီ။ သူကြီးပြောသလို မီလီယံ ဘစ်ဇနစ်လေ။
ဒါဆိုရင် အခုကတည်းက ကန်ထရိုက်ဆွဲလိုက်မယ်
King KTV နဲ့ ကင်းမာဆပ် အတွက်လေ …
ရွာထဲမှာ လူများလာတော့ ကြိုတင်ဈေးကွက်ယူထားမှ
အရင်က ဆရာတုဆရာယောင်တွေလုပ်တဲ့နည်းလေးတခု ပြောပြချင်တယ်။
အသားပွပြီး တင်းပြီး ထူတဲ့အသီးတမျိုးမျိုး (မက်မွန်သီးဟာအကောင်းဆုံးပဲ)
သီးကင်းကျော်ပြီး အရွယ် သုံးပုံနှစ်ပုံရောက်ပြီဆိုရင် သစ်သားကိုထွင်းထားတဲ့ ပုံစံခွက်မကျပ်မချောင် အနေတော်လေးနဲ့ စွပ်ထား။
ကြီးလာတော့ ပုံစံခွက်ကိုခွာရင် သူ့အသီးပုံမဟုတ်တော့ပဲ ကိုယ်လုပ်တဲ့ပုံဖြစ်သွားရော တဲ့ …။
အဲဒါနဲ့လိမ်စားပေတော့ … ပေါ့။
ကြားဖူးတာနော် ။ ကိုယ်တိုင်တော့ စိတ်မ၀င်စားလို့ မလုပ်ကြည့်ဖူးဘူး။
ဒီမှာဆို ကီလိုမာလကာနဲ့လုပ်ကြည့်ရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။
စမ်းကြည့်ပါလား.. အောင်မြင်သွားရင် သူယောင် မာလကာ ဆိုပြီး ဈေးကွက် တင်ရောင်းလိုက်ရင် အထူးအဆန်း ကြိုက်တဲ့ လူတွေ ၀ယ်ကြမှာ အမှန်ပဲ။
ပုဝိုင်းတဲ့အသီးကို အဲသလို ရှည်ရှည်ကြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။
ကြားဘူးတာက ဘုရားဆင်းတုပုံ ဘုရားစေတီပုံ လုပ်ပြီး လိမ်စားတာမျိုးဆိုတော့လေ။
မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ မြင်ဘူးတဲ့ သူယောင်သီး ပုံစံကတော့ အဲလို ရှည်ရှည် မဟုတ်ဘူး အမျိုးသမီးတယောက် လက်အုပ်ချီပြီး ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတဲ့ ပုံပါ ကိုကိုအောင် ပြောတဲ့ အသီးပုံစံ လုပ်လို့ ရမယ် ထင်တယ်။ ပုံအနေအထားကတော့ အကျီပါပုံ မရဘူး။
မမြင် ဖူးဘူး ၊ ဆန်းတယ်နော် ။
ဟိုးတလောကတော့ မြို့ထဲသွားတုန်းက ဆူးလေနားမှာ သူယောင်သီးဓါတ်ပုံ ဆိုပြီး
ရောင်းနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အပင်မှာ သီးနေတဲ့ပုံတွေ။ ကိုယ်လုံးလှလှ မိန်းမပုံ လေးတွေ။ အရုပ်လေးအတိုင်းပဲ။
ဓါတ်ပုံပဲရောင်းတာ။ အသီးအစစ်တော့ မတွေ့ခဲ့ဘူး။
ဆန်းပေမဲ့ စစ်လားမစစ်လားသိဖို့ကမလွယ်ဘူး zoe နဲ့ pan pan ရေ ။ဒီလိုပုံမျှိုးဆိုတာလောက်တော့ သိရတာပေါံ့။ နောက်ရက်မှရွှေလှေလောင်းငွေလှေလောင်း ပုံတင်ပေးဦးမယ်
ဆူးရေ သူယောင်ပင် သီးတဲ့အချိန်တခါလောက်ထပ်သွားကြည့်ပါလား။ သီးတာတွေ့ရင်ခူးခဲ့ပေးဦးနာ်။ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ ဇော်ဂျီတောင်ဝှေးတော့မရှိဘူး။ ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ဝှေးပဲရှိတယ်။
သူယောင်သီး ကမှ လူလိုပုံလို့သိထားသေးတာ ဇော်ဂျီတောင်ဝှေးကတော့ သူုပုံစံဘယ်လိုရှိလဲ နဲနဲမှ မသိဖူးဘူး ကျိုက်ထီးရိုးတောင်ဝှေးလိုပဲနဲ့တူမလားမသိဘူးနော
သူယောင် မယ် ရှိမရှိ စစ်မစစ် လောလော လတ်လတ်ကြီးကို သက်သေပြစရာရှိပါတယ် မယုံရင်
(ဘာကြောင့် ဗုံးတွေ ခွဲ ရသလဲ ) ပိုစ်.မှာ သွားပြီးဖတ်ကြည်.ကြ …
ကိုကြောင်ကြီးလား ဘယ်သူလဲတော.မသိဘူး သူယောင်မယ် ကို ကော်မန့် တုတ်နဲ. ထိုးလို. စိတ်ဆိုးနေတယ်…
ကျေးဇူးပါ အဘဆွေ ဖတ်ပြီးပါပြီ။ သူယောင် မယ်ပြောတာလဲမှန်တာပဲရော
ဟုတ်ပါ့.. သူယောင်မယ် ပြောတာလည်း ဟုတ်ပါ့…ရွှေနီလေးက ရှမ်းလား(မှန်တာပဲရော) လေသံကို ကျက်မိလို့
ရှမ်းမဟုတ်ပါဘူး အဘဆွေ . ဗမာပါ ။ ဒါပေမဲ့ ဗမာစစ်စစ်နဲ့မတူဘူးလို့တော့ပြောကြပါတယ် .ရှမ်း တရုပ် စပ်တယ်လို့ထင်ကြပါတယ် . အသက်ကဝေေ၀နဲ့အတူ ပါ ( ဆူး မပြောခင် ကိုဟာကိုပြောထားတာ ) လေသံကလဲ နဲနဲ ၀ဲတယ်လို့ပြောကြပါတယ် .
ဆေးကြိမ်လုံးကတော့ Harry Potter ကားထဲကလို ဖြစ်မှာပေါ့
သူယောင်သီး ဆီုတာ တကယ်ရှိတာလား စိတ်ထဲမှာ သူယောင်သီးတို့ သူယောင်မယ်တို့ဆိုတာကို
ဒဏ္ဍာရီ ပုံပြင်တွေလို့ထင်နေတာ .. ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ အခုလို မြင်ဘူးအောင်တင်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ
ပုံပြင်တွေလို့ထင်ထားတာတွေလေးတွေ လာအိုဓျေးထံမှာတွေ့ခဲ့တာ နွယ်ပင်ရေ .
ကွန်ပြူတာပြောင်းထားလို့ ဓာတ်ပုံတွေက အဟောင်းထဲမှာမို့ နောက်ရက်မှပုံတင်ပေးဦးမယ် ( မြန်မာလိုသိတ်မရိုက်တတ်တာလဲပါတယ်. English လိုလဲမကျွမ်းကျင်ပါဘူး)
ဟုတ်ကဲ့။ရိုက်လာတာကတော့ အကြီးပဲ တင်ဖို့သေးလိုက်တာ အဲလိုဖြစ်သွားတာပါ . စကားမစပ် မမဒေါ်မေအေးဦးနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီး လို. မမအကြောင်းတောင်နဲနဲပြောပြပါသေးတယ်
ရုက္ခဗေဒ အထူးပြုကို ပြကြည့်ကြပါလား ..
အများအားဖြင့် အဲဒီလို ပုံမျိုးတွေက အပင်ရဲ့ အမြစ် တချို့မှာ အစာသိုလှောင်တတ်တဲ့အတွက် ဖောင်းပွနေတာကို အမြင်အားဖြင့် လှလို့ ရောင်းတာ ပြတာ ဖြစ်ဖို့ များတယ်